Bitsika Afghana: ny Hamas, ny Demokrasia ary ny Sariitatra · Global Voices teny Malagasy
Bitsika Afghana: ny Hamas, ny Demokrasia ary ny Sariitatra
Voadika ny 01 Desambra 2018 17:03 GMT
Manazava ireo antony nandresen'ny Hamas ny fifidianana i Afghan Warrior:
“Nandresy ny fifidianana tao Palestina ny antoko Islamika Hamas ary tsy nampoizin'ireo firenena sasany io fandresena io ka naneho ny ahiahiny manoloana izany izy ireo. Raha ny hevitro, tokony hanaiky ny fandreseny isika ankehitriny satria nofidian'ny vahoaka Palestiniana ry zareo. Nanampy ny vahoaka mahantra tao Palestina ny antoko Hamas ka izany no nahatonga azy ireo nifidy azy”.
Milaza i Dialogue 3 fa tsy vonona handray ny demokrasia ny vahoaka Afghana satria mahantra sy tsy mahay mamaky teny ny ankamaroany. Ny fandriampahalemana sy ny hanina isanandro no zavatra voalohany tadiaviny. Milaza ilay bilaogera fa tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana ny Parlemanta Afghana ny ankamaroan'ny vahoaka. Araka ny voalazany, ilaina voalohany indrindra ny fitomboan'ny toekarena mialoha ny hitondràna ny firenena amin'ny demokrasia. (Rohy amin'ny teny Persianina)
Manoratra i Niko Bad (ny Tsara & ny Ratsy) fa te hanome endrika mahery setra ny Islam & ny Mpaminany ireo sariitatr'i Mahommet anatin'ny gazety Danoà (rohy maty), izay tsy azon'iza ekena ary manan-jo ho tezitra ireo Silamo. Tsy miombon-kevitra amin'ny fihetsiketsehana mahery setra izy ary milaza fa tsy azo ekena ny fandorana ny sainampirenena sy ny masoivoho ary hanamafy fotsiny ny hafatr'ilay sariitatra ny fihetsika tahaka izao. (Rohy amin'ny teny Persianina)